करिश्मा भन्छिन् : “कुलमानलाई हटाउँनु हुँदैन”,,, तपाईं चाहिँ के भन्नुहुन्छ नी? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
करिश्मा भन्छिन् : “कुलमानलाई हटाउँनु हुँदैन”,,, तपाईं चाहिँ के भन्नुहुन्छ नी?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ मसान्तमा सकिँदैछ । चार वर्षअघि जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएका बेला घिसिङलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
अहिले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन छन् । अहिले नेकपाको सरकार छ । घिसिङलाई नियुक्ति नगर्ने, अर्कैलाई गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको पनि छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा घिसिङको ठाउँमा अर्कोलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न थालियो भन्दै ‘कुलमान घिसिङ चाहिन्छ’ भन्ने अभियान चलाइएको छ ।
घिसिङकै कारण दैनिक १८ घन्टासम्म हुने लोडसेडिङ घटेको आमजनताको बुझाई छ । त्यसैले फेरि पनि उनलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नायिका करिश्मा मानन्धर पनि यो अभियानमा सामेल भएकी छन् ।
मंगलबार फेसबुकमा कुलमानसँगको तस्बिर राख्दै उनले लेखेकी छन्, ‘थोरै आफ्नो सोचेर धेरै अरुको लागि गर्ने कमै मान्छे हुन्छन्, कुलमान घिसिङ फेरि चाहिन्छ ।’ आफू र पति विनोश मानन्धरले कुलमानसँग खिचेको तस्बिर करिश्माले फेसबुकमा राखेकी छन् ।
Previous कुलमान लाई पुन नियु”क्ति बारे मन्त्रालय बाट आयो यस्तो खबर,,, हेर्नुहोस्।
Next हरियो धानखेतमाथि गृहमन्त्रीको सभा : बाढीले बचेको धान पनि फाँडेर फर्कियो! के भन्नुहुन्छ ?